कुनै पनि समयमा इन्डोर बिरुवाहरु अपार्टमेंट को भित्री मा सजावट को सबै भन्दा सुन्दर तरिका को एक मानिन्छ। फूल मात्र हाम्रो भावनात्मक राज्य सुधार छैन किनभने सहमत, र आँखा प्रसन्न, तर पनि हावा शुद्ध। तर, राम्रो तरिकाले आफ्नो घर मा houseplants महसुस गर्न बढ्न र मालिकहरूको आनन्द गर्न ब्लूम क्रममा, यो आवश्यक राम्ररी तिनीहरूलाई हेरचाह गर्न मात्र छैन। मुख्य कुरा हो - जहाँ तिनीहरूलाई राख्न र कसरी थाहा। कोठा मा प्रत्येक बोट लागि यो आफ्नो ठाउँमा परिभाषित गर्न महत्त्वपूर्ण छ। नियुक्ति, हेरविचार र हजारी लागि आधारभूत आवश्यकताहरू सिक्ने पछि, यो प्रत्येक को लागि छनोट गर्न सजिलो हुनुपर्छ कोठा सुन्दर र उपयोगी बोट।
सूर्यका आदर संग भित्री मा इन्डोर बिरुवाहरु कसरी निपटान गर्न
सबैले रंग प्रत्यक्ष सूर्यका वा तत्संबंधी कमी अलग प्रतिक्रिया थाह छ। सबैभन्दा प्रजाति बिहान सूर्य त तीव्र छैन र तिनीबारे राम्रो फूल असर जहाँ पूर्व पक्ष, मा राम्रो बढ्छ। यस्तो yucca, घ्यु वा विभिन्न succulents रूपमा राम्रो ठाउँ बिरुवाहरु को पश्चिमी र दक्षिणी पक्षले। तर घर को भित्री मा इन्डोर बिरुवाहरु, ठूलो पात, प्रकाश गर्न unpretentious, तिनीहरूले यसैले उत्तर सामना Windows वा पनि गाढा कुनामा मा कोठा मा राख्न सकिँदैन छ। यसलाई उल्लेख पर्छ भनेर यस्तो cyclamen र violets पनि सूर्यका धेरै undemanding रूपमा रंग यी प्रकार।
विभिन्न कोठा को भित्री मा बिरुवाहरु
कार्बन डाइअक्साइड - पहिले उल्लेख रूप मा, घर सफा इन्डोर हावा को भित्री मा इन्डोर बिरुवाहरु, तिनीहरूले अक्सिजन दिन को समयमा र राति उत्पादन। रंग को यस सम्पत्ति अलग प्रत्येक कोठा लागि आफ्नो चयनमा खातामा लग्नु गर्नुपर्छ।
जब छनौट बेडरूम लागि रंग, यो व्यक्ति रात को सबै भन्दा लागि कोठा मा विचार छ कि लायक छ, त्यसैले ठाउँ ठूलो पात संग व्यापक फूल सिफारिस छ। साथै, राख्नुभएको छैन बेडरूम बलियो-गन्ध बिरुवाहरु संग बर्तन।
जब बच्चाको कोठा को डिजाइन तेज पात वा thorns रंगहरू त्याग्न पर्छ, बच्चा रूपमा चोट सक्छ। तपाईं यहाँ पोस्ट गर्न सक्नुहुन्न र ती फूल, बच्चालाई गर्न हानि कारण सक्षम छन् जो। उदाहरणका लागि, केही बोट (dieffenbachia, philodendron वा Spathiphyllum) एलर्जी प्रतिक्रिया को रस संग सम्पर्क मा बच्चा को छाला मा उत्पन्न गर्न सक्छ। साथै, साना बच्चाहरु छनौट गर्दा गल्ती नगर्न, चित्र मा एक खतरा houseplants प्रस्तुत विचार राम्रो त, हात गर्न आउने केहि मा चबाने प्रेम।
जीवित पूर्ण ठूलो पात संग फिट ठूलो बिरुवाहरु कोठा को भित्री तिनीहरूले सिधै भुइँमा राख्न सकिन्छ। अपार्टमेंट को भित्री मा सानो इन्डोर बिरुवाहरु विशेष फूल रैक लागि डिजाइन मा स्थान समूहहरूको राम्रो छ। विशेष रूप यहाँ घुंघराला प्रकार हेर्न हुनेछ।
सबै भन्दा राम्रो विकल्प भान्सा लागि फर्न हुनेछ। यो बोट धेरै चिस्यान-मायालु छ र पूर्ण हावा सफा। बाथरूम एक अद्भुत महसूस जस्तै छ विदेशी फूल सुनगाभाहरू जस्तै, तर तिनीहरूले निरन्तर sprayed गर्न आवश्यक छ। यस्तो anthuriums, कैक्टस, Tulip र ओपेरा कार्टून अक्षर, कार्यालय वा कम्प्युटर अन्य कोठा मा अपरिहार्य रूपमा undemanding बिरुवाहरु।
रोचक विचार र सिफारिसहरू: आफ्नै हातले पर्खालहरु सजाय
को भित्री को दृश्य - डिजाइन मा एक नयाँ शब्द
कसरी एक किशोरी लागि भित्री कोठा सिर्जना गर्न?
मान्छे संगठित प्राप्त गर्ने 15 घर कुराहरू
परम्परागत क्रिसमस केक अंग्रेजी: फोटो संग नुस्खा
Majewski क्रेन radiators देखि हावा pockets समाप्त
को तिबिया को भंग: भौतिक चिकित्सा
केटा वा केटी? रमाइलो तरिका बच्चा को सेक्स निर्धारण
ठाँउहरु र इतिहास Tikhoretsk
दोस्रो विश्व युद्ध को सहभागीहरु। युद्ध मा सहभागी देशहरूको सूचीमा